izihloko zabantu abadala | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: iindimu zabantu abadala
ezaposwa ngomhla 01.12.2018 01.12.2018
Njengoko usebenza ngendlela eya kwintliziyo yendoda esiswini sayo, zama ukuba ungayigqithisi. Kukho ukutya okunokonakalisa umhla osondeleyo. Ukugquma kwesandi kunye ne-colic esiswini, ukubunjwa kwegesi, ukubetha-okunje ...
Ukuxininisa impilo yobomi besetyhini ukuyiphepha?
ezaposwa ngomhla 01.12.2018
Njengabafazi beminyaka yobudala, ukuqhuba kwabo ngokwesondo kunokuhla ngokukhawuleza. Ukwehla kwe-libido kunye nolonwabo zezona zikhalazo ziphambili. Akukho sidingo sokubhala olu tshintsho ngaphambi kwexesha kutshintsho lwehomoni, kufanelekile ukuvavanya okhethekileyo ...
Ulwabelana ngesondo. Iingcamango, ukuQeqesha nokuSebenza
Ngaba uyafuna ukuzama ukwabelana ngesondo ezimpundwini, kodwa kwangaxeshanye izihlunu zakho zingena ngovalo? Ezi ngcebiso zilandelayo ziya kukunceda ukuba uqale kwaye wonwabe ngothando lwamaGrike. Ithiyori Zininzi i-nerves kwindawo ye-anal, kunye nokukhuthaza kwabo ...
Ngaba kunzima ukuba ngumfazi?
Ngaba kunzima ukuba ngumfazi? Ndixolele ngokuphendula umbuzo ngombuzo, kodwa ... Ngaba kunzima ukuhlala kwaphela? Abafazi bayazalwa, abenziwanga. Kukho, ewe, abantu abangabuthandiyo ubuni babo ...
Ngaba ubufanasini sisifo okanye kukugqwetha? Ngaba ukunyanga kwamafanasini kunganyangeka?
Ngaba ubufanasini sisifo okanye kukugqwetha? Ngaba ukunyanga kwamafanasini kunganyangeka? Umbuzo onomdla kwaye unzima, impendulo kuwo ayikho nzima. Ngoba? Kungenxa yokuba le nto kufuneka isonjululwe ngononophelo ...
Ngaba yinyani ukuba kumajoni empi ayongezwa kwaye wongezwa i-bromine ukuba itiye? Okanye ingaba inkolelo?
Ngaba kuyinyani ukuba i-bromine yongezwa yongezwa kwiti eti emkhosini? Okanye ngaba yintsomi? Kumaxesha eSoviet, bongeze.Into yokuba siye saphola kuye, khange ndiyiqaphele.Yiyo ke le indlela ekufuneka ibromine isetyenziswe ngayo ukuya kwi-18-20 ...
Ngomzimba omncinci wezesondo, ikhondom ayifuni nantoni na?
Ngamalungu omzimba omzimba omncinane ikhondom ayinamsebenzi? Indoda enepenisi encinci ayiyinyumba kwaye inokuba ngutata ngokulula! Ukuba utata awucwangciswanga kweli nqanaba lobomi, ke ...
Ngaba amadoda afana nabasetyhini abancinci, abancinci?
Ungathumela njani iileta ezenzakalisayo?
Ungazithumela njani iileta zoqobo ezintathu ezihlekisayo? Ngokwenxalenye yoku ndiyalithanda igama lam lesidlaliso kwaye andilisebenzisi kwi-BV kuphela. Ndicinga ukuba, ngokomgaqo, ndikhulile ...
Ngamaphi amaxesha ofuna ukutshaya umntu ongabhemi?
Umntu ongatshayiyo ufuna ukutshaya nini? Ndatshaya kwakanye ebomini bam xa ndandifumene ingozi embi. Bendingena mandla okukhala, ndiye ndothuka xa ndijonga lemoto icekeceke ngasemva. Cwaka ...
Kutheni ama-hormone adlala entwasahlobo?
Kutheni le nto iihomoni zidlala entwasahlobo? Kuba emva kobusika obude, yonke indalo ekugqibeleni iza kubomi, amagqabi, iintyatyambo, ukudubula. Kuya kushushu phandle. Yonke indalo ibonakala ibhengeza ukuqala kobomi obutsha. Ndifuna uku…
Yintoni eyaziwa kwimbali ka-Ivan Kalita?
Yintoni eyaziwayo ngo-Ivan Kalita kwimbali? Inyaniso yokuba ufumene iilebheli evela kuHorde Khan ngenxa yolawulo olukhulu, emva kokuba i-khan efanayo ivunyelwe ubukhosi baseMoscow. Ngamafutshane, irhafu ku ...
Yintoni ipissing? Kukho abantu abavulwe ngumchamo, okanye kunoko amantombazana akhupha umchamo wabo. Bangayenza komnye umntu, okanye babhale nje, kwaye isithandwa sokukhuphela siya kufumana kuso ...
Ngubani "UMNTU OLUNGILEYO" kuwe?
Iphephandaba + i-puddle = iindlela zokuzikhusela ezizilungeleleneyo? Ngaba kukho umntu ozama?
Iphepha-ndaba + idama = ukuzikhusela ngeendlela eziphuculweyo? Ngaba kukho umntu owake wayizama? I-Delirium kungcono uthathe iingqekembe zeruble, wenze ikholamu ubungakanani besandla sakho, usongele yonke into ngeplastikhi yokuncamathela kwezonyango- xa le nto ...
Kutheni abathunywa bevangeli befana nabafazi abaninzi?
Kutheni le nto isikhundla sobufundisi sithandwa kakhulu ngabafazi abaninzi? Ngamaxesha ahlukeneyo obomi besini somfazi, bayasithanda isikhundla sobufundisi ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Ekuqaleni kwesenzo sokwabelana ngesondo- esi similo sibangela uthintelo oluncinci, ...
Kutheni i-intombi yam isaba ngesondo?
Kutheni intombi yam isoyika isondo? Ndicinga ukuba yayingekuko nje ukuba wayenamava amabi kakhulu kwaye angathandekiyo, kwaye mhlawumbi neliya lokuqala xa wayephaphile.
Iyintoni intsingiselo ye-69 posture?
I-hymen ayisoloko iwonakaliswe ngexesha lokulala?
Ngaba i-hymen ayisoloko yonakaliswa ngexesha lokwabelana ngesondo? Ewe kuyenzeka. Kuqhelekile xa amanye amantombazana ekwazi ukulala ngesondo, kodwa kwangaxeshanye ukuthembeka kweengoma akuzange kwaphulwe. ...
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-5,920.